Baararka iyo makhaayadaha oo codsanaya in la dabciyo xeerarka Covid19 | Star FM
Home Wararka Kenya Baararka iyo makhaayadaha oo codsanaya in la dabciyo xeerarka Covid19
Baararka iyo makhaayadaha oo codsanaya in la dabciyo xeerarka Covid19
Ururka ay ku midoobeen baararka Khamriga, madadaalada iyo makhaayadaha ee loo soo gaabiyo (Perak) ayaa dowladda ka codsaday inay fududeyso xayiraadaha ka dhanka ah Covid-19 si ay u shaqeeyaan saacado dheeraad ah.
Madaxa fulinta ee ururkan Eunice Ogea ayaa sheegtay inay xaqiijinayaan in dhammaan macaamiisha goobahan ay u hoggansamaan xeerarka Covid19.
Waxaa ay intaa ku daray in baararka iyo maqaayadaha ay yihiin kuwa ugu dhaga nugul ee u hoggaansama tilmaamaha wasaaradda caafimaadka.
Ms Ogea ayaa dowladda ugu baaqday inay tixgelisaa codsigooda islamarkaana ay wakhti dheeraad ay sii shaqeeyaan.
Milkiilayaasha baararka iyo makhaayadaha ayaa sheegay in tallaabadi ay dhawaan dowladda dhexe ugu fasaxday gaadiidka dadweynaha ee loo yaqaano mataatuuda ay raaci karaan tirada rakaabka ee ay qaadi karaan, islamarkaana ayagana dhankooda ay codsanayaan in ilaa xilli dambe ay shaqeyn karaan.
Previous articleQoorqoor” Dalku wuxuu ku heshiiyay doorasho dadban marka doorasho dadban siday tahay iyo sidii ay ahayd beey ku socotaa”
Next articleDHAGEYSO:Agoon ku dhibaataysnayd Dadaab oo cabashadoodi laga soo jawaabay